Waa suurtagal in la tababaro si loo helo oo loo ogaado khamri wanaagsan | Ragga Stylish
Sida loo baro boodhkaaga si aad ugu raaxaysato khamri wanaagsan
Khabiirada khamriga badanaa waxay adeegsadaan ereyo sida "adag", "dhiirasho" ama "xarrago leh”Marka la sharaxayo carafta ama dhadhanka khamriga wanaagsan. Xitaa way ku dhiiran yihiin inay sharraxaan qaabdhismeedyo iyo dareenno badan oo ay adag tahay in la fahmo.
Kuwa doonaya inay si buuxda ugu raaxaystaan ​​khibrada khamri wanaagsan waa inay ogaadaan taas dhadhanka iyo urta waa la tababari karaa. Halkaas, carafta iyo dhadhanka ayaa lagu kala saari karaa loona aqoonsan karaa shuruudo.
1 Sida loo aqoonsado khamri wanaagsan
2 Heerkulka khamriga wanaagsan
3 Sifooyin badan
Sida loo aqoonsado khamri wanaagsan
Sommeliers waxay kula talinayaan "kuwa aan khibrada lahayn" inay Waxa ugu horreeya markay tahay inaad ku raaxaysato khamri wanaagsan waa si sax ah: naftaada u raaxeysiga.
Arday badan ayaa raba inay dhaqso u dhaqaaqaan, iyagoo isku dayaya inay anshax marin halxidhaale ah qarsoodi ah oo ilooba mabda'a aasaasiga ah.
Dhammaan udugga iyo dhadhamintu waa kuwo shaqsiyan iska leh. Maxaa loogu talagalay qof kasta isku darka walxaha qaarkood waxay u horseedi karaan isku-uruurinta dareemo wacan, kuwa kalena waxay u noqon kartaa waayo-aragnimo aan fiicnayn.
Si loo ogaado haddii sheygu wanaagsan yahay, waa inaad isku daydaa. Haddiise sanka iyo dhaskuba wax garanayaan, waa in la garto waxa ay jecelyihiin iyo waxa aysan jeclayn.
Waxa kale oo xusid mudan in, Si loo garto dhadhanka wanaagsan, maahan inaad khabiir noqotid.
Heerkulka khamriga wanaagsan
Heerkulku waa cunsur aad muhiim u ah oo awood u leh inuu soo qabto dhammaan nuxurka khamriga wanaagsan. Halkaasna runtii si buuxda ugu raaxeyso.
Xuduudaha ayaa kala duwan, iyadoo loo eegayo nooca cabitaanka:
Cadaan khamri dhalaalaya waa kuwa ay tahay in si qabow loo cuno: inta udhaxeysa 6 iyo 10 darajo Celsius.
Khamriga Rosé, inta udhaxeysa 8 iyo 12 digrii.
Reds, inta u dhexeysa 14 iyo 16 digrii.
Da 'weyn ama da' weyn Iyagu waa kuwa ay tahay in lagu liqo heer kulka kulul, inta u dhexeysa 16 iyo 18 darajo Celsius.
Isbarbardhiggu waa mid aad u weyn waxtar u leh aqoonsiga dhadhanka iyo go'aaminta tayada: aashito badan ama ka yar, macaan badan ama ka yar, iwm. Kuwani waa arrimo kaa caawin kara marka la magacaabayo sifooyinka: ganaax, mid adag, xarrago leh ama aan caadi ahayn. Sifooyinku sidoo kale waxay noqon karaan kuwo taban: banaan, daciif ah, fidsan oo dhadhan ...
Ilaha sawirka: Cubaneando con Mario / Cuntada Amantel
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Sida loo baro boodhkaaga si aad ugu raaxaysato khamri wanaagsan
Afar siyaabood oo loogu daro jaakad maqaar xilliga dayrta
Cashada xagaaga ee ugu fiican Madrid: casho iyo is biirsaday